Home » Vaovao momba ny zon'olombelona » Mandrahona ny hanakatona ny Twitter i Russia raha tsy mifanaraka amin'ny sivana izany
Manahy mafy ny Twitter noho ny fitomboan'ny fanandramana hanakana sy hivezivezy amin'ny resadresaka imasom-bahoaka amin'ny Internet
Miomana ny hametraka fandrarana tanteraka amin'ny Twitter ny manampahefana rosiana
Nanambara ny manampahefana rosiana fa efa nametraka fangatahana mihoatra ny 28,000 izy ireo mba hanesorana ny toerany
Nanentana ny Twitter hanaraka ny baiko hanesorana ny atiny voafaritra mba hisorohana ny fandrarana
Raha ny tatitra farany natao dia miomana ny hametraka fandrarana tanteraka ny Twitter tambajotram-pifandraisana sosialy 'ao anatin'ny herinandro', raha tsy mifanaraka amin'ny fitakian'i Russia ny 'votoaty tsy ara-dalàna' ny sehatra media sosialy amerikana.
Ny lefitry ny lefitry ny mpanelanelana amin'ny media ao Russia, Roskomnadzor, Vadim Subbotin, dia nilaza tamin'ny talata fa, raha "tsy mamaly tsara ny fangatahanay ny Twitter - raha toa ka mandeha ny zava-misy - dia ho iray volana no hakatona nefa tsy mila didim-pitsarana."
Mandritra izany fotoana izany dia nanentana ny goavambe internet any California izy hanaraka ny baiko hanala ny atiny voafaritra mba hisorohana ny fandrarana.
Tany am-piandohan'ity volana ity, Roskomnadzor - birao mpanatanteraka federaly Rosiana tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso, fanivanana ary fanaraha-maso eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery, dia nanambara fa hanomboka hampihena ny hafainganan'ny fifamoivoizana ao amin'ny Twitter noho ny fiampangana fa “tsy manala votoaty tsy ara-dalàna” ilay orinasa.
Nanambara ny manampahefana rosiana fa efa nametraka fangatahana mihoatra ny 28,000 izy ireo raha halefa izy ireo hatreto.
Nampitandrina i Roskomnadzor tamin'izany fotoana izany fa, raha tsy manara-dalàna ny Twitter, "ireo fepetra ireo dia hitohy hifanaraka amin'ny lalàna mifehy, hatramin'ny fanakanana" tanteraka ny serivisy.
Tamin'ny fanambarana iray navoaka tamin'ny herinandro lasa teo, nilaza ity goavambe media sosialy ity fa "nahalala ny tatitra fa minia mampihemotra malalaka sy tsy mitanila any Twitter ny Twitter noho ny olana momba ny fanesorana votoaty." Nanampy ny orinasan-teknolojia fa "niahiahy fatratra tamin'ny fanandramana hanakana sy hikitika ny resaka imasom-bahoaka an-tserasera."
Tany am-piandohan'ity volana ity, nampitandrina ny Putin an'i Rosia fa ny tranonkala media sosialy dia ampiasaina “mba hampiroboroboana ny atiny tsy ekena tanteraka hahatratrarana ny tanjon'izy ireo manokana, 'ferret'.”